Dhageysiga dacwaddii Arboga oo bilaabatay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dhageysiga dacwaddii Arboga oo bilaabatay
La daabacay måndag 8 maj 2017 kl 09.24
Guriga xagaaga lagu nasto ee dilka ka dhacay. sawir: TT
Maxkamadda Västmanlands tingsrätt maanta waxaa ka bilowdey dhageysiga dacwad la xiriirta dil ka dhacay guri xagaaga lagu nasto oo ku yaala banaanka degmada Arboga.
Haweeney 42 jir ah iyo nin saaxiibkeed ah ayaa ku eedeysan tuhun ah dil iyo iskuday dil. Waxaa loo heystaa in haweeneyda iyo ninka saaxiibkeeda ah ay dil u geysteen haweeneyda aabbaheed iyo in ay dhaawac daran u geysteen hooyadeed oo ka badbaaday iskuday dil oo lagu qaarajin lahaa.
Dilka iyo iskudayga dil waxuu dhacday 3dii bishii Agoosti sannadkii hore. Ninka saaxiibka la ah haweeneyda ayaa qirtay arrimaha lagu eedeynayo. Waxuuna ku dooday in uu muqaadareysnaa kadibna uu midi la dhacay labada ruux oo sariirtooda jifa, halka uu sheegay haweeneyd la eedeysan in ay ku sugneyd gudaha gaari taagnaa banaanka hore ee guriga ay waalidiinteeda jiifeen.